NS Malagasy Archive | NewsMada | Page 7
Par Taratra sur 19/06/2019 Edito Taratra, NS Malagasy
Miandry fatratra ny fotoana hampidinan’ny fanjakana ny vidin-tsolika ny rehetra. Tsiahivina fa tsy nihetsika mihitsy ny vidiny tato anatin’ny volana maro, raha tsy hiteny afa-tsy ny tamin’ity taona 2019 ity. Na izany aza, nanome toky ny filoham-pirenena, fa tsy maintsy hampidinina ny vidin-tsolika, mba hitsinjovana ny maro an’isa ary nohamafisiny tamin’ny zoma lasa teo. Fihaonana […]
Par Taratra sur 19/06/2019 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Niakatra fampanoavana omaly ka naiditra am-ponja vonjimaika (MD) eny Antanimora ireo zanaka polisy roa tompon’antoka tamin’ny fanaovana herisetra sy nandratra olona teny Ambohikely Ampitatafika ary ireo roa lahy niharan’ny herisetran’ireto polisy… Nahazo fahafahana vonjimaika (LP) ilay kaomisera rain’izy roa lahy nidaroka ilay raim-pianakaviana iray teny Ambohikely Ampitatafika, ny fiandohan’ny volana jona lasa teo. Naiditra am-ponja […]
ASIEF: efa eo am-piomanana tanteraka i Toamasina
Par Taratra sur 18/06/2019 Divers, NS Malagasy
Efa eo am-piomanana tanteraka amin’ny fiatrehana ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an’ny mpiasam-panjakana, amin’izao fotoana izao ny faritr’i Toamasina, na dia mbola amin’ny 7 ka hatramin’ny 20 oktobra aza no tapaka hanaovana izany. Fifaninanana karakarain’ny Asief (Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des fonctionnaires). Ny filoha nasionalin’ny Asief (Association Sportive Interministérielle pour l’ Entretien des Fonctionnaires), Atoa […]
Par Taratra sur 18/06/2019 NS Malagasy, NS-Sports
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny fiofanana karakarain’ny fikambanana « Terre en mêlées », eo ambany fiahian’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena. Mpiofana miisa 40 mahery, avy amin’ny sehatra samihafa no misitraka izany. Hampihena ny tsy fitoviana eo amin’ny lahy sy ny vavy eto Madagasikara, amin’ny alalan’ny rugby, io no tanjona amin’izao fiofanana izao, izay haharitra herinandro […]
Kitra – «Can 2019»: tsy azo alefa amin’ny «écran géant» ireo lalao 52
Nambaran’ny tale jeneralin’ny ORTM, nandritra ny fivahiniany tao amin’ny fahitalavi-pirenena (TVM), fa ny onjam-peom-pirenena (RNM) sy ny TVM irery ihany ny hany afaka mampita mivantana, ireo lalao 52 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019), taranja baolina kitra, hatao any Egypta, ny 21 jona ka hatramin’ny 19 jolay, ho avy izao. Araka ny fepetra […]
Par Taratra sur 18/06/2019 NS Malagasy, NS-Politique
Nandray andraikitra avy hatrany. Nidina ifotony nijery ny olan’ ireo tsena eto Toamasina ny filoha vaovao ny delegasiona manokana (PDS) mitantana ny kaominina, Razafimanana Christian, ny herinandro lasa teo. Nojereny avokoa ny etsy amin’ny tsenan’i Bazarikely ka nahitany maso ny fivangongon’ny fako efa manaka-danitra sy ireo voalavo efa mitovy habe amin’ny saka. Eo koa ny tsy […]
Fitantanana ny Mosque 67 ha: voafidy ho filoha i Achile Houssein
Tontosa, afakomaly ny fifidianana ny birao handrafitra ny fitantanana ny Mosqué 67 ha, nokarakarain’ny komity mpanomana. “Vaofidy ho lehibe mpitantana ny trano fiangonana, i Achile Houssen, miaraka amin’ny mpitambola sy mpanampy ny fanamarinam-bola ary ny mpanolotsaina miaraka amin’ny sekretera jeneraly. Eo koa ny komitin’ny fahendrena sy ny mpikambana tsotra…”, hoy izy ireo nitatitra izany tetsy […]
Atsimo Andrefana: haloa faran’izay haingana ny fisotroan-dronono
Tojon’ny tsy azo anoharana ireo beantitra mandray fisotroan-dronono any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Nisy nanafika ny iraky ny Tahirimbolam-panjakana mpitondra ny « Titres de paiement pension juin 2019» sy ny « Bons de caisse pensions alimentaires juin 2019 » ny 15 jona 2019, raha niainga teo amin’ny toeram-piantsonan’ny mpitatitra Sanfily Toliara. Lasan’ireo olon-dratsy tamin’izany ireo taratasy ireo izay tokony […]
Par Taratra sur 18/06/2019 Economie, NS Malagasy
Natsangana ny vaomiera manokana “Task force”, hampanarahan-dalàna ny mpampiasa hananan’ny mpiasa fiahiana sosialy, taorian’ny fe-potoana telo volana tinapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra, ny 3 mey 2019 teo. Tanjona ny hisian’ny asa mendrika ho an’ny mpiasa malagasy, ka hisitrahany ny zony, omen’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS). Vaomiera iombonana mandrafitra ny Task force ny […]
Fizahantany any Alaotra: miankina betsaka amin’ny fahavitan’ny lalana RN 44
Ahoana ny fomba hisintonana mpizahatany ho any Alaotra ? Fanontaniana nilofosan’ny mpikambana ao amin’ny Ofisim-paritry ny Fizahantany Alaotra-Mangoro (Ortalma), nivory ny 6 sy 7 jona teo izany, tao Ambatondrazaka. Nandritra ny fivoriana, nanao tombanezaka sy namaritra ny tetikasa 2019 ny Ortalma. Somary manatombo ny any Mangoro, satria manana an’Andasibe ahitana valan-javaboahary efa hatramin’ny fanjanahantany. Taona iray, […]
“Mpifindra monina vokatry ny toetr’andro”
Miantraika mivantana any amin’ny zava-mananaina ny fahapotehan’ny alan’Ankarafantsika. Notsorin’ny talen’ny Parka, Jaotera, fa miharitra ny loharano, izay mamatsy ny manodidina, hatrany amin’ny lemak’i Marovoay, izay tsy voakojakoja araka ny tokony izy. Mitombo ny fikaohan’ny riaka ny tany Miha tototry ny fasika ny tanimbary, ka lasa mirona any amin’ny voly an-tanety ny mponina. Mifandray amin’ny fiovan’ny […]
Par Taratra sur 18/06/2019 Faits Divers, NS Malagasy
Mitaraina ireo mponina ny amin’ny afitsok’ireto mpiavy ireto. Nambaran’ny talen’ny parka, Jaotera sy ny ben’ny Tanàna Marosakoa, Gilbert, fa angalarin’izy ireo ny mangahazo maniry eny an-tanimboly. Kely hery ny tompon’andraikitry ny parka sy ny ben’ny Tanàna, satria mirongatra ny tsy fandriampahalemana. Nisy tamin’ny mpiasan’ny parka novonoin’ireto olona ireto. Marobe izy ireo satria mahatratra 20 hatramin’ny […]
Ambolena katsaka, lojo, voanjo, mangahazo,…, amin’ny alina
Niray feo ny tompon’andraikitra samihafa any an-toerana, fa “doran’ireto olona ireto ny ala na ny baiboho, ary andatsahana katsaka, na ambolena mangahazo, na voanjo, na lojo avy eo. Matetika amin’ny alina no hanaovan’izy ireo izany. Manana Birao ifoton’ny fananan-tany (Bif) ny kaominina Andranofasika. Nilaza ny tompon’andraikitra iray ao, Moravelo André, fa « tsy manana taratasin-tany ara-dalàna […]
Tontolo iainana: mihazakazaka ny fahapotehan’ny alan’Ankarafantsika
Ahina ho ringana ato anatin’ny dimy taona ny valan-javaboahary any Ankarafantsika. Antony, mirongatra ny fanapotehan’ny ala vokatry ny fitomboan’ny mponina, indrindra ireo mpifindra monina avy any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy, tratry ny haintany sy ny tsy fisian’ny rano ary ny kere. Fanadihadiana. Efa tato anatin’ny 15 taona no nisian’ny mpifindra monina any amin’ny kaominina Andranofasika, […]
Fahasalaman’ny nisy ny ativava: olona 47.000 hotiliana, hotsaboina, hoentanina…
Antoky ny fahasalamana ny fahadiovan’ny nify sy ny ativava. Matetika, rehefa simba na misy fahabangana ny nify, zara raha voatsako ny sakafo ary miantraika any amin’ny taovam-pandevonan-kanina izany. Ho fanentanana ny olona hitandro hatrany ny fahasalaman’ny nify sy ny ativava àry, nosantarina any Toamasina, ny 17 hatramin’ny 20 jona, ny “Herinandron’ny fahasalaman’ny nify sy ny […]
Fanampiana ny mpiara-belona: nanome ra ireo mpiasan’ny Star
Efa taona maromaro izay no nandraisan’ireo mpiasan’ny Star anjara tamin’ny hetsika fanomezan-dra. Nitohy tamin’ny faran’ny herinandro teo izany, nifanandrify indrindra tamin’ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fanomezan-dra. Mpiasa niisa 52, avy amin’ny sampana Tanjombato, Andranomahery ary Andraharo no nandray anjara tamin’ity indray mitoraka ity. Indroa isan-taona izy ireo no manatontosa izany hetsika fanampiana ny […]
Tsy diso anjara tamin’ny fanatanterahana ny Tagnamaro Andron’ny olom-pirenena, ny asabotsy lasa teo, ireo distrika mandrafitra nyfaritra Analanjirofo. Hetsika notarihin’ny sampan-draharaham-paritry ny serasera sy kolontsaina. Ho an’ny tao Fenoarivo-Atsinanana, nodiovina ny bazary be ivelany sy anatiny. Nisy koa ny fanadiovana ny eo anoloan’ny Tranompokonolona. Sokajin’olona maro no tonga namaly ny antso. Nisy tamin’ireo mpandray anjara […]
Fifamoivoizana: mivonona amin’ny fahatongavan’ny Papa François ny polisy sy ny CUA
Efa maka bahana, telo volana mialoha. Andran-tsira sahady amin’ny fandaminana ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra sy ny manodidina ny hetsika ataon’ny polisim-pirenena, raha ny nambaran’izy ireo, ny herinandro teo. Hanampy ireo am-perinasa ireo mpianatra ho polisy mamita fiofanana momba ny fampiharana eny an-dalambe. “Anisan’ny famahana olana voalohany ny fitohanan’ny fifamoivoizana izany … Eo koa ny fiaraha […]
Filohan’ny SMM: “Tsy ekena ny hamoahana ireo miaramila 27 voafonja”
Miaramila 27 voafonja any Tsiafahy amin’izao noho ny vono olona. Tsy manaiky faneriterena ny hamoahana azy ireo ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM). “Efa mahafantatra isika, na zaza aza: tsy azo atao ny mamono olona. Anjaran’ny olona manatanteraka baiko tsy ara-dalàna ny mizaka ny adidiny. Azony atao ny tsy manatanteraka izany, ary tsy mampigadra […]
Rakotorahalahy André: « Henatra ho antsika ny tsy fahavitana ranty tahaka izao »
Par Taratra sur 18/06/2019 NS Malagasy, NS-Culture
Manan-karena ny zavakanto malagasy. Voaporofo etsy amin’ny AFT Andavamamba izany, amin’ny alalan’ireo karazan-javamaneno miranty ao amin’ny « Les faiseurs de musique ». Nosokafana, omaly, tao amin’ny Alliance Française etsy Andavamamba ny fampirantiana zavamaneno Malagasy, nampitondraina ny lohateny « Les faiseurs de musique ». Hetsika tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny fiverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena. Valiha, korintsana, varatra, kaiambaramba, amponga, sodina, kabaosy, sns, […]
“Fitiavan-tanindrazana mameno ny fisainana, ka ny tenin-drazana no asandratra sy iainana”. Lohahevitra nofidiana sy voizina mandritra ny fanamarihana ny iray volana anandratana ny Teny malagasy, mandritra ity volana jona ity io. Ho tohin’ny fanamarihana, sy ho fankalazana ihany koa ny faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, hisy ny hetsika maromaro izay nomanin’ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny […]
Mpanao fanafihana, mpanamboatra basy: saron’ny polisy i Eddy, fitaovam-piadiana mahery vaika tratra
Jiolahy raindahiny 40 taona, gagilahy amin’ny fanafihana mitam-piadiana ao Toamasina i Eddy, araka ny fanazavan’ny polisy. Tsy vitan’izay fa mpangalatra herinaratry ny Jirama ihany koa izy sady ao anatina tambajotran-jiolahy mpangalatra moto. Tratran’ny polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’i Mangarano Toamasina, ny zoma 14 jona 2019 lasa eo izy tamin’ny 11 ora tao Tanambao Verrerie Toamasina. […]
Par Taratra sur 18/06/2019 En Bref, NS Malagasy
Novakin’ny jiolahy fanindroany indray ny fiangonana katolika ao Sainte Marie, ny alin’ny asabotsy lasa teo. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny fitaovana fanamafisam-peo toy ny baffle, ampli. Tsy vitan’izay fa naparitak’ireo jiolahy tao am-piangonana ny mofo masina. Fanindroany amin’izao ity fiangonana ity no novakin’ireo jiolahy tsy mataho-tody. Voalohany, lasan’izy ireo ny lakolosy fa tamin’ny asabotsy alina teo kosa dia ny […]
Manamafy ny MDN: tsy azo atao ny mivarotra sy manapoaka tsipoapoaka
Mbola nanamafy hatrany ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena (MDN) fa voarara ny mivarotra sy manapoaka tsipoapoaka. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny MDN hatrany, ao anatin’ny volan’ny ankizy isika izao sady fankalazana ny faha-59 nitsingerenan’ny nahazoana ny fahaleovantena sy ny nijoroan’ny Foloalindahy Malagasy. Tsy afa-misaraka amin’izany koa ny fanapoahana ny tsipoapoaka. Noho izany, rarana mafy ny fivarotana […]
Toamasina: tratra ireo jirofo halatra 160 gony
Tratra ny zoma alina teo tao Toamasina ny kaomiaobe iray nampiahiahy ny polisy ka niroso tamin’ny fisavana avy hatrany izy ireo. Nosakanan’ny polisy ilay fiara ka nojerena ny taratasy momba ny entana nentin’ilay fiara. Rehefa nosavaina ny tao anatin’ilay kamiaobe dia hita tao ireo jirofo miisa 160 gony milanja 8 taonina efa vonona haondrana. Nosamborina avy […]
« Précédent 1 … 5 6 7 8 9 … 1 093 Suivant »